Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kwiNtengiso ye-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kwintengiso ye-Instagram
Disemba 20, 2018 0 IiCententarios 1383
Xa bafuna ukutsala abathengi abaninzi, abantu baphendukela kwiinethiwekhi zentlalo. Ngelixa kuyinyani, uninzi lwabanini bewebhusayithi kunye neenkampani bayalibala i-Instagram, kuba yinto encinci xa ithelekiswa nezinye iisayithi. Nangona kunjalo, le yimpazamo, kwaye usomashishini okrelekrele kufuneka Sebenzisa i-Instagram Ukuba ufuna ukufumana abathengi abaninzi. Ngale nto engqondweni, kukho iingxaki ezithile. Apha phaya ezintathu izibonelelo kunye neendlela ezintathu ezimbi zeNtengiso ye-Instagram.
Umfanekiso ubalulekile: njengoko besitsho, umfanekiso uxabisa amagama aliwaka. Cinga ngayo, xa uqhuba ishishini, uya kufuna ukusebenzisa imifanekiso ukubonisa imveliso okanye inkonzo yakho. Oku kubaluleke ngakumbi xa kuthengiswa ukutya, iimveliso zokwehla kobunzima, okanye nayiphi na enye into abantu abathanda ukuyijonga bayonwabele. Nangona kunjalo, umntu unokuqhubeka kwaye abonise iindawo zokuhamba okanye naliphi na inani lezinto. Ukubeka ngokulula, le yenye yezona ngcebiso zibalaseleyo zokusebenzisa i-Instagram kwishishini, njenge Umfanekiso uya kubonisa ngokwenene iindwendwe ngexabiso eliyinyani lemveliso okanye lenkonzo. Phakathi kwezibonelelo kunye nokungalunganga kweNtengiso ye-Instagram, le yenye yezona zinto zibalulekileyo.
Kwelinye icala, xa usebenzisa i-Intanethi ukuthengisa imveliso, inkonzo okanye umbono, umntu uya kuyifuna ukuba iyeke intsholongwane. Ukuba isiza okanye umbono uqhubekile yintsholongwane, umntu uza kufumana imali eninzi kwaye uya kufumana iindwendwe ezininzi ezintsha nochulumanco. Ngesi sizathu, xa usebenzisa i-Instagram, umntu kufuneka aqinisekise ukuba banikezela ngexabiso lokwenyani kumndwendwe. Ke, kwaye kuphela emva koko, umntu unokubona ukuba ifoto iya yintsholongwane, okuya kukhokelela kuninzi lweendwendwe ezitsha kwisiza.
Okokugqibela, njengoko kukhankanyiwe, xa usabelana ngefoto nabahlobo bakho, ingahamba intsholongwane. Ayisiyiyo loo nto kuphela, xa usebenzisa i-Instagram, abalandeli baya kwenza uninzi lomsebenzi. Ukuba inkampani ibonelela ngefoto enomdla, iya kuhamba ngokuqinisekileyo inentsholongwane. Ekugqibeleni, umntu kufuneka athabathe ingqalelo izibonelelo kunye nokungalunganga kweNtengiso ye-Instagram kwaye ayisebenzise. Ngale ndlela, abalandeli baya kuba yinxalenye yomsebenzi.
Ngoku, xa ujonge abathengi abatsha, umntu uya kufuna ukugxotha isihlwele esikhulu. Ewe, nangona ulutsha oluninzi kunye nabantu abadala besebenzisa Instagram, ayinguye wonke umntu onemali yokuchitha. Nangona kunjalo, kukho amathuba okuba baya kubanjwa kwaye babuye xa sele bekhulile. Nokuba yeyiphi na indlela Xa ujonga elona qhinga lilungileyo le-Instagram, umntu kufuneka akhumbule ukuba ayingabo bonke abantu abanokufaka imali.
Ngokulandela umntu owuthandayo kwi-intanethi, abantu abaninzi abanamdla kwenye into ngaphandle kokuchitha ixesha lokuphumla. Oko kuthetha ukuba, ngelixa uku-Instagram, abantu abaninzi bafuna nje ukuchitha ixesha lokuzonwabisa kwaye abananjongo yokuchitha imali.
Ngelixa ukuthandwa kwe-Facebook kunye ne-Twitter kudume, abantu abaninzi abazi malunga ne-Instagram. Oku kuyatshintsha, kodwa hayi ngokukhawuleza, kwaye usomashishini okrelekrele kufuneka ayazi loo nto Kuya kufuneka ulandele elona qhinga lihle le-Instagram ukuba ufuna ukufumana impumelelo, kuba akukho lula njengokusebenzisa ezinye iisayithi zenethiwekhi.
Xa iwebhusayithi okanye ishishini liqhuba, omnye kufuneka asebenzise i-Instagram. Ngelixa ayisiyeyona mdlalo ilungileyo esixekweni, kuyanceda ukusebenzisa le ndawo yenethiwekhi yoluntu ukufumana abathengi abatsha abavela kwihlabathi liphela. Ndiyathemba ukuba kuluncedo ukwazi izibonelelo kunye nokungalunganga kwintengiso ye-Instagram kwishishini lakho. Olunye ukhetho olufanelekileyo lokunika ishishini lakho kukukhuthaza Thenga abalandeli be-Instagram.
I-Instagram yeenkampani: yonke into oyifunayo kufuneka uyazi
Iingcebiso ze-Instagram: indlela yokuyisebenzisa ukukhuthaza uphawu lwakho